FBK GRAPHER ရုရှား DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
သင်္ချာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတူးဖော်ရေးကနေပျေါပေါကျစခွေငျးငှါအဓိကပြဿနာများတစ်ခုမှာတစ်ဦးသင့်လျော်သောအချိန်ဇယားကိုတညျဆောကျရနျဖွစျသညျ။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများရှောင်ရှားရန်, သင်ကြံစည်များအတွက်အထူးဖန်တီးအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ FBK Grapher - တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ရုရှားဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ FBK Grapher လေယာဉ်ပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဂရပ်များ၏အရည်အသွေးမြင့်ဆောက်လုပ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့-to-အသုံးပြုမှု tool ကိုလည်းမရှိ။
အများဆုံးအလားတူဆော့ဖျဝဲ၌ရှိသကဲ့သို့, တစ်ဂရပ်ဆွဲနိုင်ရန်အတွက်, သင်ပထမဦးဆုံး function ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအထူးဒိုးကို setting တွင်အချို့သော Display ကိုချိန်ညှိရပေမည်။
တစ်ဦးအထူးသဖြင့် trigonometric function ကိုတစ်ဂရပ်ဖနျတီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါသင်အခက်အခဲများကြုံနေရနေတယ်ဆိုရင်, FBK Grapher အဖြေတစ်ခုနှင့်အတူသူတို့ကိုပေး။
မျှမျှတတသာယာသောဥပမာတစ်ခု parametric form မှာသို့မဟုတ်ဝင်ရိုးစွန်းကိုသြဒီနိတ် အသုံးပြု. အမျိုးမျိုးနည်းလမ်း features တွေရေးသားဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ညီမျှခြင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအချက်များကို၏သြဒီနိတ်အစုတခုလည်းမရှိလြှငျ, သငျသညျအထူး table ထဲမှာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးများ zanesya အချိန်စာရင်းသူတို့အပျေါမှာတညျဆောကျနိုငျသညျ။
ထိုကဲ့သို့သောတန်းဂျသို့မဟုတ်သာမန်အတိုင်းဇယားအပေါ်နောက်ထပ်လိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်အထူး tool ကအစီအစဉ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
FBK Grapher ၏နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ feature ကိုအလိုအလျောက် variable ကို၏တန်ဖိုးပေါ် မူတည်. အဆိုပါ function ကိုတွက်ချက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်အလွယ်တကူသီးခြားသေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက် parameters များကိုတစ်ဦးကိုသြဒိနိတ်အခြေစိုက်ဂရပ်ဖစ်ကို set up နိုင်ပါတယ်။
FBK Grapher သင်သည်အမျိုးမျိုးသောသင်္ချာလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ထုထည်ကြီးမားသောဂရပ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလားတူညီမျှခြင်းအပေါ်အလုပျအစီအစဉ်၏ရလဒ်စို့, သင်တတ်နိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များ၏အသွင်အပြင်၏အထွေထွေစိတ်ကူးရရှိရန်သို့သော်အများဆုံးသိကောင်းစရာများမဟုတ်ပါဘူး။
အခါအလုပ်အစီအစဉ်တွင်ပြီးဆုံးသည်နှင့်သင် FBK Grapher အတွက်သီးခြားဖိုင်တင်ပို့ဖို့အဆင်ပြေအခွင့်အလမ်းကိုတင်ပြအတွက်အဆင်သင့်ဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက site ၏မရှိခြင်း။
Program ကို FBK Grapher သင်္ချာလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဂရပ်များက၎င်း၏က high-quality နဲ့စဉ်းစားဟန်ကွပ်မျက်ဖို့ကျေးဇူးတင်စကားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာတစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အရေးကြီးသောတကယ်တော့ဒီထုတ်ကုန်လုံးဝအခမဲ့ကြောင့်စျေးကြီးနိုင်ငံခြားဖြေရှင်းချက်ထက်က၎င်း၏အလုပ်ပိုကောင်းမသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
3D Grapher AceIT Grapher အဆင့်မြင့် Grapher Gnuplot
FBK Grapher - Two-ရှုထောင်ဖန်တီးခြင်းနှင့်သင်္ချာ functions တွေသုံးရှုထောင်ဂရပ်များ, တာဝန်ခံအခမဲ့တိုးချဲ့ဘို့ program တစ်ခု။
ရေးသားသူ: FBKStudio Software များ
ဗီဒီယို Watch: Use the remainder theorem and synthetic division to find fk (စက်တင်ဘာလ 2019).